Toamasina: nijery ny olan’ny tsena ny PDS | NewsMada
Toamasina: nijery ny olan’ny tsena ny PDS
Par Taratra sur 18/06/2019
Nandray andraikitra avy hatrany. Nidina ifotony nijery ny olan’ ireo tsena eto Toamasina ny filoha vaovao ny delegasiona manokana (PDS) mitantana ny kaominina, Razafimanana Christian, ny herinandro lasa teo. Nojereny avokoa ny etsy amin’ny tsenan’i Bazarikely ka nahitany maso ny fivangongon’ny fako efa manaka-danitra sy ireo voalavo efa mitovy habe amin’ny saka. Eo koa ny tsy fisian’ny filaminana amin’ny tsy fipetrahan’ny mpivarotra amin’ny faritra tsy tokony hivarotana. Ohatra, ireo mivarotra eny ambony tatatra. Ny tsy fisian’ny lalana handehanan’ny mpividy.
Nisehoseho sy te ho hita…
Manampy izany ny rano maloto miandrona mameno ny tsena. “Tsy maintsy hisy ny fanadiovana ny tsena ato ho ato ary hapetraka ny fitsipika sy ny lalàna mifehy antsika ety. Eo koa ny rindran-damina mba ho tsena maha te hiditra sy ny hanatonan’ireo te hividy ny entana”, hoy ny PDS.
Nanamarika izany anefa ny fahitana ireo mpanara-dia efa ho anjatony, tombanana fa efa mitady ranondranony sahady an’ity mpitantana vaovao eo anivon’ny kaominina Toamasina ity. Nisehoseho sy te ho hita…